Indlu yeeNdwendwe eNgasemva kwendlu
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguWillow
Indlu yethu yeeNdwendwe esandul' ukuguqulwa epholileyo emva kwekhaya losapho lwethu yayiyilwe njengendawo yokuphumla eyonwabileyo yosapho kunye nezihlobo, kwaye siyavuya ukwazisa iindwendwe ngokunjalo. Ibonisa isitayela sefama yanamhlanje ebukekayo, indawo yokulala epholileyo, indawo yomlilo epholileyo yombane, ikhitshi egcwele kakuhle ukulungiselela ukutya, kunye nezinto ezilula zakusasa ezibonelelweyo (kubandakanywa namaqanda e-organic aphuma kwiinkukhu zethu, ukugalela i-organic okanye ikofu yesiFrentshi, iziqhamo, kunye nokunye. izinto ezintsha ezibhakiweyo).
Indlu yeeNdwendwe yindlu yesitudiyo esandula ukuguqulwa encanyathiselwe kwivenkile esemva kwendlu yethu. Kuphela indawo yendlu yeendwendwe ekhoyo ukuze isetyenziswe ziindwendwe. Sinabantwana abathi ngamanye amaxesha badlale ngasemva kwendlu, ukuze uve ingxolo yabantwana. Kodwa senza konke okusemandleni ukubafundisa ukuba nolwazelelelo ngeendwendwe zethu, sivumele ukuba bucala kunye nesithuba esizolileyo kangangoko sinako. Akukho ndawo yokuhlamba iimpahla ezikhoyo, kodwa ukuba ufuna ukuhlamba impahla, cela nje! Kukho i-TV ene-Roku kunye ne-blu-ray ye-DVD player ye-movie yasebusuku, kodwa asinayo i-cable tv ekhoyo ngeli xesha. Ikhitshi libandakanya isihluzo samanzi somgangatho ophezulu, i-airfryer/toaster oven, ihotplate, imicrowave, ifriji/ifriji egcweleyo, kunye neepani, izitya, iziqholo/istaples ukulungiselela ukutya okulula.
Sihlala kwindawo ezolileyo nepholileyo. Kukho abamelwane abakufutshane nendlu yeendwendwe, ukuze uve amazwi abo ngamaxesha athile.
Sihlala kumgama osondeleyo wokuhamba ukuya e-Azalea Park kunye nedolophu yaseBrookings. Sikwangaphakathi kwemizuzu embalwa ukuya kuMlambo i-Chetco kunye neelwandle zasekhaya ezifana ne-Sporthaven, i-Chetco Point, i-Mill Beach, kunye ne-Harris Beach. Singaphantsi kwemizuzu eli-10 ukusuka kwindawo entle ngokumangalisayo yeSamuel Boardman State Park. . .elinye lawona macandelo athandwayo kwaye adumileyo afotwa e-Oregon Coast.
Umbuki zindwendwe ngu- Willow
Siza kubulisa iindwendwe zethu kwaye sibancede bazinze. Ukuba iindwendwe zidinga nantoni na ngexesha lotyelelo lwazo zamkelekile ukusibhalela nanini na (iinombolo zefowuni ziya kuthunyelwa kwindlu yeendwendwe) okanye zinkqonkqoze kumnyango wethu wangaphambili. Siyakonwabela ukutyelela neendwendwe zethu kumgama okhuselekileyo. Kodwa sikwayavuya ukubanika isithuba sabo ngonxibelelwano oluncinci ukuba ngaba bayathanda.
Siza kubulisa iindwendwe zethu kwaye sibancede bazinze. Ukuba iindwendwe zidinga nantoni na ngexesha lotyelelo lwazo zamkelekile ukusibhalela nanini na (iinombolo zefowuni ziya kut…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Brookings